राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगै आठ पदाधिकारीको जम्बो टोलीलाई पनि कतार पठाउन जरुरी थियो त ? – Khel Dainik
राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगै आठ पदाधिकारीको जम्बो टोलीलाई पनि कतार पठाउन जरुरी थियो त ?
काठमाडौं (खेलदैनिक) । एएफसी एसियन कप २०१९ को छनौट खेलतर्फ यमनविरुद्ध खेल्न दोहा जाने लागेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको शुक्रबार एक कार्यक्रमकाबीच बिदाई गरियो ।
सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्यहरुलाई बिदाई गरिए कै दिन अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको रवैयाप्रति प्रश्न उठेको छ । कतार जाने नेपाली टोलीमा एन्फाले थप ८ पदाधिकारीको जम्बो टोलीलाई पनि समावेश गरेको छ ।
फुटबल सम्वद्ध पदाधिकारीहरु टोलीसँगै विदेश जानु र वैदेशिक फुटबलबारे जानकारी लिनु र त्यसलाई स्वदेशको फुटबलमा व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने हो तर त्यसो कहिल्यै हुन सकेको छैन । टोलीसँग पुग्ने अधिकांश पदाधिकारीहरु घुम्ने माहोल बनाएर टोलीसँग विदेश भ्रमणमा पुग्ने गर्दछन् ।
एन्फाले ती पदाधिकारीहरुको ठाउँमा लजिस्टिक म्यानेजर, स्पोर्टस मेडिसिन डाक्टर, प्राविधिक अध्ययन टोलीहरुलाई समावेश गर्न सक्थ्यो तर त्यसो कहिल्यै गरेको पाईंदैन । एन्फासँग प्राविधिक अध्ययन टोली छैन । नेपाली टोलीसँगै जाने त्यत्रो जम्बो पदाधिकारी टोलीको आवश्यकता किन त ? यसबारे कसैसँग ठोस जानकारी छ या छैन ? त्योबारे पनि सोधखोज हुनु जरुरी छ ।
एन्फाको केन्द्रिय चुनाव यहि चैत्र १४ गते हुने भनिए तापनि ललितपुर उच्च अदालतले एन्फाको सो निर्वाचन र अधिवेशनलाई तत्कालका लागि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । एन्फाको वर्तमान नेतृत्व पक्षले केन्द्रिय चुनावका लागि मत आफ्नो पक्षमा पार्न चालेको अर्को खेल त होईन ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसपटक एन्फाको केन्द्रिय चुनावमा अध्यक्ष पदका लागि एन्फाका पूर्व उपाध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वर्तमान उपाध्यक्ष मणि कुँवर भिड्दै छन् ।
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीसँगै कतार जाने अन्य पदाधिकारीहरु :
राजेन्द्र लामा, निराजन डंगोल, सुमन श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठ, अजय बुदथापा, पवन कार्की, मोदिनी घिमिरे, रमेश अधिकारी
गोलकिपर: किरण चेम्जोङ, एलन न्योपाने, विकेश कुथु
डिफेन्डर: बिराज महर्जन, रजिन धिमाल, देवेन्द्र तामाङ, दिनेश राजवंशी, आदित्य चौधरी, अनन्त तामाङ
मिडफिल्डर: बिशाल राई, रोहित चन्द, हेमन गुरुङ, हेमन्त थापा मगर, सुजल श्रेष्ठ, सुनिल बल, अन्जन बिष्ट, भरत खवास
← कतार जाने नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बिदाई एन्फालाई एएफसी र फिफाको निर्देशन “तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर” →
प्रतिष्ठित इलिट वुमन रेफ्री प्यानलमा अन्जना चैत्र ९, २०७४
किरनको टोली माजियाको लगातार दोस्रो जित चैत्र ९, २०७४
रोहितको टोलीसँग रोनाल्डिन्होको टिम पराजित चैत्र ९, २०७४
एभनिरलाई हेमजा गोल्डकपको उपाधि चैत्र ९, २०७४
एन्फा उपाध्यक्ष केसीलाई गृहजिल्लामा भव्य स्वागत चैत्र ९, २०७४
मैत्रीपूर्ण खेलमा एनआरटीको रोमाञ्चक जित चैत्र ९, २०७४